Thwebula Imgur 2.4.6.205 – Vessoft
Imgur – isofthiwe ulayishe izithombe ukuze inkonzo ethandwa. Isofthiwe ikuvumela ukuba ulayishe izithombe noma GIFs ukuze inkonzo, iziphi kamuva ibekwe izigaba abafanele. Imgur iqukethe izigaba eziningi ezahlukene ne mems kuhlekisa, namaqiniso esayensi amazing, izilwane funny, iqoqo okungahleliwe izithombe, njll Isofthiwe kwenza khona uvo lwabo, ivoti wafaka ukuthandwa izigxobo. Futhi Imgur ikuvumela ukufihla inhlamba kanye nokuqukethwe omdala.
Ukulayisha Fast kwezithombe
Kwabiwa Kalula kwezithombe izigaba
Amazwana nokuhlolwa izikhala
Ukuvala shaqa of okuqukethwe omdala
Amazwana on Imgur:
Imgur Ahlobene software:
English, Українська, Deutsch, Русский... Tumblr 3.8.4.2